Ngwa kichin Manufacturers & Suppliers - China Kitchen ngwa Factory
UV tingcha Board ...
Nkọwapụta MSkpụrụ MS-08 / MS-09 ...
Nkọwapụta gosiri voltaji 220V 6 ...
Nkọwapụta Model MK-03 Voltaji 220 ...
Nkọwapụta Model MH-09 Volta ...
Portable ahụhụ R ...
Nkọwapụta Model MH-08 gosiri P ...
Obere osikapa osi ite ulo otutu otutu oru akpaka osikapa ofe di omimi ala sugar sugar osikapa ite iji belata sugar. Mee ka shuga na-efunahụ dị mfe dị ka iku ume, rụọ ọrụ ma hapụ ibu ma rie nri. Obere satiety, na-atọ ụtọ na ọ bụghị abụba obere osikapa shuga, dị mfe iji belata shuga ekpokọtara shuga maka nsị a, ịhụnanya!
Ejiji na nke bara uru, dị mfe iburu ma jiri. Ebughibu na kọmpat, ọ naghị ewe ohere dị ukwuu. Nke a kọmpat cookie ga-mejupụtara ọrụ gị oche. Ma obu, zoputa ya n'ime drawer gi! Akọrọ-kpo oku mgbochi na overheat nchedo. Aluminom alloy PTC okpomọkụ, ọzọ ala. Gburugburu steaming na-ekpo ọkụ, sie nri zuru ezu. Nri nri ọkwa 304 Ihe eji edozi nri dị mma maka isi nri na ịchekwa nri, ikike 900ml.
Enwere ike iji igbe nri ehihie dị ka igbe nri ehihie, osikapa ọkụ eletriki, ite eghe, ite ofe ite, ite braising, obere ụdị ahụ dị ukwuu, dị ka nri na-atọ ụtọ n'ọfịs ma ọ bụ n'ụlọ. Ugwu a kpochapụrụ na kpo oku na-eme ka nri gị dị ọkụ, ma ị ka nwere ike ịnụ ụtọ nri na ezigbo ụtọ mbụ. Box wights 0.84KG na bụ Ẹkot a iko nri ehihie igbe. Enweghị nchekasị banyere ụcha mmiri mgbe ị tinyere ya na Akpa.
1.20 Liter ikike, anwụ-igba aluminum nonstick pan bụ nke mbughari na nwa na-abụghị osisi osisi mkpuchi; Oge akara aka (30-720 mins); Obi iko mkpuchi, na gwara mmanụ ahụ; Okpu okpu nwere mkpuchi Silicone. Isi aru na kpo oku efere; frying pan maka grilling, steamer (ihe Tritan). Nweta usoro kpo oku na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ sie ike ma dịrị n'otu. Na igwe ighe ọkụ eletrik ga-akwụsị ịnọgide na-ekpo ọkụ ma debe ọnọdụ okpomọkụ ahụ mgbe ọnọdụ okpomọkụ rutere setịpụrụ gị, nke na-enyere gị aka sie nri dị mma karịa. Enwere ike iji ya dị ka nri ehihie, dị mfe ịha.
Obere Ngwa Masticating Juicer: Nri na-edozi ahụ nke ụmụ gị na ezinụlọ gị. Ihe ọ juụ juụ masticating dị nwayọ bụ obere, kọmpat, fechaa pịa juicer na USB na-akwụ ụgwọ, were ya naanị, ị ga-enweta ihe ọ juiceụ ,ụ ọhụrụ, ụtọ na ahụike dị mma n'ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla, ọbụlagodi maka azụmahịa, njem ma ọ bụ ụlọ. Gbochie ọxịdashọn, chekwaa ịhapụ ndị ọzọ nri n'ime ihe ọ juiceụ juiceụ, nye gị ihe ọ juiceụ juiceụ na-edozi ahụ. Ọbụna pulp nwere ike ji mee ihe maka jam, pickling efere na ndị ọzọ.